IZITAYILE ZE-59 EZISHUSHU ZEBLONDE ZAMADODA (IIFAYILE EZINGAMA-2021 ZEENWELE EZINGAMANYALA) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ezona ndlela zilungileyo zokuBala kweNwele zamadoda
Izinwele ezimhlophe zihlala zinendawo eyodwa, enomdla kwisitayile samadoda. Ngapha koko, zininzi kakhulu iinwele ezipholileyo zabafana abaluhlaza, kubandakanya ezimfutshane, eziphakathi kunye nezide, kangangokuba…
Izinwele ezimhlophe zihlala zinendawo eyodwa, enomdla kwisitayile samadoda. Ngapha koko, zininzi kakhulu iinwele ezipholileyo zeenwele ezimdaka, kubandakanya ezimfutshane, eziphakathi kunye nezide, kunokuba ngumceli mngeni wokuthatha isigqibo malunga neenwele ezimhlophe.
Nokuba ungumntu o-blonde ngokwendalo, uboya iinwele zakho, okanye uneempawu eziqaqambileyo ze-blonde, uneendlela ezingenamda zokuthambisa iinwele zakho kwaye ujongeka ulungile. Ukuba ufuna ukukhuthazwa ngaphambi kokucheba kwakho okulandelayo, uya kuzithanda ezi zinwele ze-blonde zamadoda.
1Ezona ndlela zilungileyo zokuBala kweNwele zamadoda
1.1Iinwele ezimfutshane eziMdaka
1.2Iinwele eziPhakathi eziMhlophe
1.3Izinwele ezinde ezimnyama
1.6Iinwele eziQinisekisiweyo eziNwele
1.7Izinwele eziMdaka eziMdaka
1.9Umyalezo weenwele ezimdaka
1.12Iinwele ezi-Spiky Blonde
1.13Iinwele zeMohawk Blonde
1.14Blonde Buzz Sika
1.15Iinwele ezi-blond eziqinileyo
1.16Amadoda amnyama aneenwele ezimnyama
1.18Izinwele ezimnyama kunye neFringe
1.19Amacandelo amafutshane, iinwele ezinde eziPhezulu eziMhlophe
1.20Iinwele ezimnyama eziKhehliweyo
1.21Izinwele zeShaggy Blonde
1.22Izinwele eziMnyama eziMnyama
1.23Iinwele ezimdaka ezimdaka
1.24Iinwele zeStrawberry Blonde
1.25IPlatinam Blonde Izinwele
1.27Iinwele ezi-Ash Blonde
1.28Izinwele eziDayiweyo eziNwele
Ngefade okanye i-undercut emacaleni kunye neenwele ezimfutshane okanye ezinde ngaphezulu, iinwele ezimhlophe zinenani iinwele ezithandwayo zamadoda ukukhetha. Ukusuka kwikama yeklasikhi ngaphezulu, ipompadour, kunye ne-buzz enqunciweyo kwindoda yanamhlanje, iinwele ezinesipiksi, kunye nembonakalo eyonakeleyo, nazi iinwele ezimhlophe zeenwele ezingamadoda ukufumana lo nyaka!
Iinwele ezimfutshane eziMdaka
Iinwele ezimfutshane ezimhlophe zihlala zihamba phambili kubafana. Kulula ukuyifumana, kulula ukuyigcina, kunye nesitayile esikhawulezayo, iinwele ezimfutshane ezimhlophe zezamadoda kwaye zicocekile. Qala nge-undercut okanye ngamacala aphelileyo kwaye ugqibe ngee-intshi zeenwele ngaphezulu.
Kuhle iinwele ezimfutshane zibandakanya abasebenzi abasikiweyo , ukusikwa kwe-buzz , Isityalo saseFrance , icala icala , Izimbo ezimdaka , kunye iinwele ezi-spiky . Ukuba unomhlathi oqinileyo, i-cheekbones ephezulu kunye neendevu ezinobunzima, ubude obufutshane buya kujongeka bu-sexy kuwe.
Ngokwendalo, uyakufuna i pomade eyomeleleyo xa uthambisa iinwele ezimfutshane. Qala ngesixa esincinci, usasaze ngokulinganayo, kwaye usebenzise iminwe yakho ukugqiba okungagungqiyo okanye ikama ukujonga okucocekileyo.
Iinwele eziPhakathi eziMhlophe
Izinto eziguqukayo kunye nesitayile, iinwele ezimdaka eziphakathi kwamadoda zigcina ubude bufutshane ngokwaneleyo ukuba bukhathalele iinwele ngokulula kodwa zide ngokwaneleyo ukuba zinokuthanani neenwele ezilungileyo.
Ukwandisa umahluko, fumana ukuphela okuphezulu okanye okuphakathi emacaleni nasemva ngokudibanisa neenwele ezinde ngaphezulu.
Ukuba uthanda ivolumu kunye nokuhamba, ipompadour ebunjiweyo, ubuyele umva engaphantsi , Ikama liphele , okanye ibadass ifeksi Izitayile ezilungileyo. Sebenzisa imveliso yesitayile sematte kwinkangeleko yendalo.
Izinwele ezinde ezimnyama
Amadoda aneenwele ezinde ezimhlophe ezingaphandle komtsalane kunye nesibheno sesini. Idumile kwaye iyonwabisa, iinwele ezinde Ufuna umonde kunye nokhathalelo olufanelekileyo ukuze ukhule. Kodwa ekugqibeleni, ungayibuyisela kwi-ponytail, uyibophe kwindoda yomntu, okanye uyiyeke ihambe kakuhle.
Ekugqibeleni, abasetyhini bathanda iinwele ezinde ezimhlophe. Nokuba ngokwemvelo unombala weenwele ezimhlophe okanye uceba ukukhulisa iinwele zakho ezimnyama kwaye emva koko wongeze amanqaku aphezulu e-blonde, sincoma kakhulu ukujonga.
Ukudityaniswa ngeendevu ezipheleleyo kunye ne-mousse okanye udongwe lokuthungwa, ungangomnye walawo makhwenkwe atyibilikayo.
I-fade haircut iyaqhubeka iyeyona ndlela ilungileyo yokucheba nokusika iinwele zamadoda emacaleni nasemva. Zininzi ezahlukeneyo iintlobo zokuphela Ukutshatisa isitayile sakho, kubandakanya phezulu , Phakathi , isezantsi , taper , kungekudala , gqabhuka, ukuhla kwaye ulusu ukubuna.
Ngethamsanqa, i-blonde fade isebenza ngako konke ukusikwa, izimbo kunye neentlobo zeenwele. Mxelele nje i-barber yakho apho ufuna ukutshabalalisa ukuqala khona kunye nendlela emfutshane ofuna ukuya ngayo.
Ngenxa yomahluko owenziwe kukuphela, le nwele ilungele iinwele ezimfutshane, eziphakathi nezide ezimhlophe.
Ipholile kwaye intle, i ngaphantsi yeyona ndlela ifanelekileyo yokuphela. I-blonde undercut igcina amacala kunye nomva umfutshane kodwa kubude obunye. Ezona ndlela zilungileyo zokucheba iinwele zithambekele ekuthambiseni iinwele, ikama ngaphezulu, ipompadour, kunye nefeksi.
Yenzelwe zonke iintlobo zeenwele, ezinje ngokuchanekileyo, zingqindilili , wavy okanye iinwele ezinekhelizi , buza i-barber yakho ukuba i-haircut ye-undercut ifanelekile ngenkangeleko yakho oyithandayo. Ukuba kunjalo, indlela ozilungisa ngayo iinwele zakho iya kubonakala ngokucacileyo kunye nale fashoni.
Iinwele eziQinisekisiweyo eziNwele
Iinwele ezi-blond ezi-curly zibonelela ngobume obukhethekileyo amadoda ambalwa anokulinganisa. Nokuba une curls zendalo okanye ufuna yenza iinwele zakho ezithe tye , Iinwele zeenwele ezijijekileyo zibukeka zintsha kwaye zintle.
Ukuba ufumanisa ukuphatha kunye nokwenza isitayile seenwele zakho ezigudileyo zibe yintlungu, jonga iinwele ezimfutshane. Iifutshane ezimfutshane kunye nokuphela kunokukufumana ukugqiba okusulungekileyo. Nangona kunjalo, abafana abaneenwele eziphothiweyo eziphakathi ukuya kwezide banokukhupha into ekhethekileyo.
Ekugqibeleni, iinwele ezi-curly blonde zinokufuzisela ulutsha kodwa luyindoda, isitayile sokulukuhla.
Izinwele eziMdaka eziMdaka
Ngelixa ngamanye amaxesha kungalawuleki kwaye kunzima ukwenza isitayile, iinwele zakho ezimhlophe ze-wavy zinokuba yinto enkulu. Ukudityaniswa kweenwele ezifanelekileyo, iinwele ze-wavy zabafana abaneenwele ezimhlophe zibandakanya ikama ngaphezulu, ibrashi umva, icala elitshayelwe ngomphetho, umphezulu wesityalo ongqindilili , kunye neentloko zokulala.
Faka isicelo se-shampoo elungileyo kunye ne-conditioner ukunqanda ukomisa iinwele zakho kunye nokwenza i-frizz. Ngeengcebiso ezifanelekileyo zesitayile, unokunyusa amaza akho ukuba abe nembonakalo entsha, enomtsalane.
I-blonde indaoda elungile Lunwele olutsha olwaqhushumbe lwenzeka kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Ngokuqhelekileyo inxitywa ngabafana abancinci, indoda ibhinqileyo ibonakala inomdla ngakumbi ngeplatinum, i-sun-bleached, kunye neenwele ezimdaka ezimdaka. Hlanganisa indoda yakho kunye neendevu ezilungiswe kakuhle kwinkwenkwe entle edibana nokubonakala kwendoda erhabaxa.
Umyalezo weenwele ezimdaka
Iinwele ezimdaka ezimdaka zenza ukuba iinwele ezigqibeleleyo kunye neziqhelekileyo. Ngokufanelekileyo isitayile esineenwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi, izitayile ezimdaka zifuna imveliso yokubamba ukukhanya ngokuqaqamba okuphantsi.
Abafana abaneenwele ezimdaka ngebala ezimoshayo banokufumana inkwenkwe embi ebusuku, ngelixa bejonga isitayile njengengcali.
Inkqubo ye- ikama ngaphezulu i-hairstyle yamadoda engapheliyo evusa iklasi kunye nobunzima. Nangona uhlobo lwakudala luqala ngetaper emacaleni, umahluko wale mihla yile ikama ngaphezulu kokucheba iinwele .
Ikama yeenwele ezimhlophe blonde ngaphezulu isebenza kakuhle kumadoda aneenwele ezishinyeneyo, ezicocekileyo okanye ezicothayo. Elula kwisitayile, faka nje imveliso ethile elungileyo kwaye ukulungele ukubrasha zonke iinwele zakho kwelinye icala.
i-phoenix tattoos yamadoda
I-blonde pompadour ingajonga kwi-trend, ipolishiwe, kwaye izithembile. Ukuya yenza ipompadour , Uya kufuna ukutyhala iinwele zakho phezulu nasemva. Yigcine endaweni yayo usebenzisa i-pomade ephezulu.
Ngestayile esifanelekileyo, iinwele zeepompadour ezikhanyayo kunye ezimnyama zibonelela ngumoya obukhali kodwa onomdla.
Iinwele ezi-Spiky Blonde
Izinwele ezimhlophe ze-blonde zinokuba yimbonakalo ye-badass edgy. Ngejeli yokuhombisa, ipomade, okanye i-wax, yenza iipikisi ezingcolileyo kuyo yonke indawo okanye ucoce iinwele ezingaphambi kwazo. Bold and fun, Iinwele ze-spiky zamadoda ungasiguqula isitayile sakho.
Iinwele zeMohawk Blonde
I-mohawk yeenwele ezimhlophe ibonelela nge-chic kunye neenwele zangoku ezinento yokoyika. Ukuphela kwe-mohawk akudingi macala achetyiweyo, kwaye ngokukhawuleza iba bhetyebhetye ngakumbi kune-mohawk yakudala. Kude kube nini kwaye ungqindilili kwisitayile sakho se-blonde mohawk esiya kugqiba ekubeni ufuna ukuba nesibindi kangakanani.
Blonde Buzz Sika
I-blonde ukusikwa kwe-buzz kukucheba okukhethekileyo kwamadoda amdaka. Le nwele imfutshane ayifuni kulungiswa okanye ukulungiswa. Sebenzisa nje iziqwengana zeenwele ngeenwele zakho ezimhlophe nge inombolo 1 okanye 2 Unogada uqhotyoshelwe.
Ilungele iimpawu zobuso bobudoda, ukunqunyulwa kwe-buzz yamadoda kusebenza kakuhle nokuba uneempawu ezibalaseleyo kwizinwele ezimnyama okanye ipeyinti edayiweyo yeplatinam blonde.
Iinwele ezi-blond eziqinileyo
Amadoda aneenwele ezingqindilili ezimhlophe anokukhetha kuzo zonke iinwele ezifanelekileyo zamadoda. Ukusuka kwizitayile ezimfutshane njenge Phezulu kwezityalo okanye Ivy League ukuya kwizitayile eziphakathi nezide ezifana nebrashi phezulu, i-faux hawk, i-fringe, kunye ne-ponytail, kukuwe ukuba uzame iinwele ezahlukeneyo.
Kwangokunjalo, abafana banokuzama imibala eyahlukeneyo yeenwele, kubandakanya istrawberry, iplatinam, ukungcola, uthuthu olukhanyayo, kunye neenwele ezimnyama ezimnyama, ukufumana iinwele ezidayiweyo ezilungileyo ebusweni nasekubukekeni.
Amadoda amnyama aneenwele ezimnyama
Amadoda amnyama aneenwele ezimhlophe zingqina ukuba unombala ongakanani na kwisitayile. Ngokubanzi, abafana abamnyama hlanganisa iingcebiso ze-blonde okanye i-platinum yeenwele ezimdaka nge-buzz cut, i-fade mohawk, uloyiko, iikhoyili zekinky, okanye ii-curls eziqinileyo.
Ekugqibeleni, i-blonde kwizinwele ezimnyama zinokwenza ukuba iinwele zivele kwaye zivele nakwesiphi na isihlwele.
Uloyiko lweBlonde lunomdla, lwahlukile kwaye luyonwabisa. Nokuba ungumbhexeshi, ufuna i-hairstyle yomthendeleko opholileyo evekini, okanye umntu omnyama othanda ukongeza umahluko kumbala weenwele zabo, izitayile zovalo ezimdaka zibonelela ngokungenankathalo, ngokulula.
Izinwele ezimnyama kunye neFringe
Ukuba udiniwe kukufaka iinwele zakho okanye ufuna nje ukubonakala okwahlukileyo, yenza iinwele zakho ezimhlophe zibe ngumkhenkce. Iinwele ze-Fringe zithandwa kakhulu kumadoda anee-curls. Vele ukhulise ii-bangs zakho, brasha iinwele zakho phambili, vumela i-blonde yakho ixhomeke ebunzi. Gqibezela ngemveliso yokukhanya ekhanyayo kunye nesitshizi seenwele kwisitayile esitshisayo eshushu.
Amacandelo amafutshane, iinwele ezinde eziPhezulu eziMhlophe
Amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu ibiyiyo yonke ingqumbo kule minyaka idlulileyo. Ngokhetho oluphezulu lwesitayile, abafana abaneenwele ezimhlophe banesitayile sokudibanisa usuku olunye, ukubuyela umva ngokulandelayo, kunye ifeksi enye. Yongeza kwizinwele zobuso ezingqindilili kunye nokuqaqanjelwa okucocekileyo, kwaye usike ngokutsha.
Iinwele ezimnyama eziKhehliweyo
Sleek, classy kwaye ithandwa, blonde iinwele ezibuyile umva kukujonga okuphumeleleyo. Sebenzisa i-pomade eyomeleleyo ngokuqaqamba okuphezulu, brasha iinwele zakho ngqo kwaye ufumane isitayile esibuhlungu esiya kuhlala sihle.
Ukuba ukhetha umthamo kunye nokuhamba, zama i-wax okanye udongwe ukuze ubambe ukukhanya kunye nokugqitywa kokulungiswa. Olu hlobo lweenwele olumangalisayo lwe-blonde lulinganisa ukukhohlisa kunye nobunkunkqele bokujongeka okupheleleyo.
Izinwele zeShaggy Blonde
Amakhwenkwe ezinwele ezimhlophe ze-Shaggy ayathandeka kwaye mhle ngayo yonke imigangatho. Kodwa iinwele ze-shaggy azigcinwanga kuphela kubantwana abancinci, abantwana kunye namakhwenkwe akwishumi elivisayo. Ukuba uneenwele ezimfutshane okanye eziphakathi, sebenzisa imveliso ngeenwele zakho, uyilungiselele ukubonakala okungafunekiyo, emva koko utshayele icandelo le-bangs yakho kwelinye icala. Ngestayile sendalo esilungisiweyo, iinwele zakho ezi-blonde ezimdaka ziya kukhupha ukuzithemba.
Izinwele eziMnyama eziMnyama
Iinwele ezimnyama ezimnyama zamadoda ziyazonwabela izibonelelo zokuba nombala phakathi komdaka kunye nomdaka. Ngapha koko, iinwele ezimnyama ezimnyama zibukeka zishushu kwaye zithandeka kubo bonke abafana.
Olona hlobo lwezinwele lubalaseleyo, fumana amacala amafutshane aphelileyo kunye neenwele ezinde ezinokufakwa kwisitayile ngeendlela ezahlukeneyo. Izinwele zakho ezimnyama ezimnyama ziya kukunika isitayile esidlamkileyo nesiyindoda.
Iinwele ezimdaka ezimdaka
Amadoda angcolileyo amdaka afumana awona mazwe mabini. Ngomtsalane wobukhwenkwe kodwa ukuhendeka kwendoda, iinwele ezimdaka ezingcolileyo ziya kuhlala zinomdla kwikamva elibonakalayo. Amantombazana athande ii-blondes ezimdaka kunye neenwele ezinde ezihamba, kodwa oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uzikhulise iinwele zakho.
Nangona kunjalo, sebenzisa imibala eyahlukileyo kwizinwele zakho ngokunika ivolumu yesitayile kunye nentshukumo yakho.
Buza umchebi wakho ukuba Taper yeklasikhi okanye ukuphela kweenwele emacaleni, kwaye ushiye ubude ngaphezulu. Faka isicelo sokukhanya kwimveliso yokubamba ephakathi kwaye uye kubukeka ngokuhlekisayo.
Iinwele zeStrawberry Blonde
Iinwele ze-Strawberry blonde lolunye umbala weenwele ezintle kubafana. Yenziwe ngokudibanisa iithoni ezibomvu ezintle ezinombala obomvu wegolide, amadoda aneenwele ze-blonde ze-blonde anokukhupha imbonakalo entle.
Ngelixa oku kukhanya kukhanya kweenwele kufanelekile kubafana abanemibala efanelekileyo, inokongeza inqanaba lobushushu obushushu kuyo nayiphi na indoda okanye umntwana.
IPlatinam Blonde Izinwele
Amadoda aneenwele zeplatinam ezimhlophe ngokwendalo ajonge ukwenza ingxelo ebhaliweyo. Ngelixa i-bleaching kunye nokudaya iinwele zakho kunokuba yingxaki, ezona zinwele zeplatinam zibalaseleyo zinokwenza umzamo ofanelekileyo. Ngapha koko, amadoda e-platinum blonde anyukile ngamanani ngenxa yalo mbala weenwele ekubeni sisimbo esithandwayo esitratweni.
Ngezona ziphumo zibalaseleyo, sicebisa ukuba uhlikihle iplatinamu yeenwele zakho esalon ukunqanda ukungahambi kakuhle ekhaya. Ukuba awuqinisekanga ngenkangeleko, abafana banokuzama nokubonisa iiplatinam blonde ngaphambi kokuhamba yonke indlela.
Ekugqibeleni, lo mkhwa ulapha ukuze uhlale kunye nayo yonke into oyithandayo iinwele ezipholileyo zamadoda izakusebenza kakuhle ngalo mbala.
Amagqabantshintshi e-Blonde emadodeni anokumangalisa kwaye adlale ngothando. Ukongeza imigca yegolide kunye ne-blonde streaks kwizinwele ezimnyama kunokukhanyisa ubuso bakho kunye neenwele, zenze ukuba isitayile sakho sibe nomtsalane ngokukhawuleza nangakumbi.
Abafana abaneempawu ezi-blonde badla ngokuba neenwele eziphakathi ukuya ezinde, nangona iinwele ezimfutshane zinokukwazi ukubukeka.
Kwaye nangona iinwele zamadoda zibalasele zilungele zonke iintlobo zeenwele, sicebisa ukuba ubonakalise imibala yakho eyahlukileyo ngokungahambi kakuhle, ukuthungwa kweenwele.
Iinwele ezi-Ash Blonde
I-Ash blonde ibonelela ngokudibanisa okuhle phakathi kweenwele ezimhlophe kunye ezimhlophe. Ukukhwankqisa kunye nokugqwesa okwangoku, iinwele ezimnyama ze-ash zingangena kwiithoni ezimnyama okanye ezikhanyayo.
Nokuba ungathanda yiphi na uhlobo, lo mbala uya kukunika ukujonga okutsha okunokukunceda ukuba uphinde uzivuselele.
Izinwele eziDayiweyo eziNwele
Ukuba awunawo umbala weenwele ngokwendalo, amadoda anokuhlala ukufezekisa oku kujongeka ngeenwele ezimhlophe ezidayiweyo. Iinwele ezimhlophe ezidayiweyo ngokwenene ziza nezibonelelo zazo ezizodwa.
Umzekelo, ungadaya iinwele zakho blonde kodwa ugcine iingcambu zimnyama, kwaye uzidibanise kakuhle nentshebe emfutshane eshinyeneyo.
itshathi yendlu yokuvumisa ngeenkwenkwezi
Iingcebiso ze-Blonde yenye yezona zinkulu zeenwele zamadoda ze90's. Ngoku ibuyile, kodwa iingcebiso zeenwele ezimhlophe zabafana namhlanje zicocekile kwaye zicocekile.
Xa wenziwe ngokufanelekileyo kwaye unqabile kwizinwele ezimnyama, iingcebiso ze-blonde zinokuphakamisa iinwele zakho.
Ukucheba kweenwele eziphakamileyo kunye nokuqinileyo
I-37 ye-Sexy Perm yeenwele zezitayile zaMadoda
Iindlela ezingama-23 ezahlukileyo zokuLungisa iinwele zamadoda
I-Mercury Triad-Isitayile sakho soNxibelelwano lwezothando
iinwele ubude obuphakathi amadoda
Fumana uphawu lwam lwezodiac
ukuvumisa ngeenkwenkwezi ilanga inyanga iphuma
ukucheba iinwele zamadoda phezulu kwaye ziqinile
indlela yokufumana inyanga kunye nophawu oluphumayo
iinwele ezimfutshane ezinqatyisiweyo
yintoni ukuphuma kwenyanga yam kunye nomqondiso welanga
I-50 yeendlela eziPhakathi eziBalaseleyo zeNdlela yokuLungisa amadoda